Mudada la filayo inuu garoomada ka maqnaado Luis Suarez iyo kulamada uu seegi karo oo la sii shaaciyey – Gool FM
(Barcelona) 18 Agoosto 2019. Kooxda Barcelona ayay dhabar jab weyn ku tahay wararka sheegaya in Luis Suarez uu garoomada ka maqnaan doono illaa bisha September.
Luis Suarez ayaa loo magacaabay safka hore kulankii ay Barcelona Jimcihii la ciyaartay naadiga Athletic Bilbao, laakiin dhaawac soo gaaray ayaa garoonka looga saaray kulankaas intii lagu guda jiray qeybtii hore ee ciyaarta.
Barcelona ayaa daaha ka qaaday in xiddiga xulka qaranka Uruguay ay dhibaato ka soo gaartay kubka lugtiisa midig, taasoo ay u badan tahay inuu weeraryahankan garoomada kaga maqnaado labada toddobaad ee soo socda.
32-sano jirkaan ayaan seegi doona kulanka isbuuca soo socda ay garoonkeeda Barca kula ciyaari doonto Real Betis, halka sidoo kale dhaliyahan la filayo inuu seego kulanka kale oo ay u safrayaan kooxda Osasuna 31-ka bishaan Agoosto.
Kooxda Catalan ayaa guldarro 1-0 kala kulantay Bilbao kulankii ka dhacay garoonka San Mamés, taasoo ka dhigtay inay saldhigtaan qeybaha ugu hooseeya kala sarreynta horyaalka La Liga.